Basola uZille “ngokuqamba amanga” ngesidlo | Isolezwe
Basola uZille “ngokuqamba amanga” ngesidlo
Isolezwe / 24 January 2013, 10:24am / SAPA
UNkk Helen Zille. Isithombe: Tracey Adams
I-ANC nophiko lwayo lwabesifazane ifuna umholi weDA, uNkk Helen Zille axolise. Bathi wasenga ezimithiyo ngesikhathi ethi wayengazi ukuthi uTelkom uxhase isidlo sasekuseni se-The New Age ayesihambele.
“Ngokubona kwe-ANC, isikhathi esiningi uZille uyakubalekela ukukhuluma iqiniso,” kusho okhulumela uKhongolose, uMnuz Jackson Mthembu, esitatimendeni esithunyelelwe abezindaba izolo.
UMthembu uthe uZille ucasha ngokuthi uyizwi labantu ekubeni elibalekela iqiniso futhi edukisa nomphakathi.
I-DA ithe isazosibhekisisa lesi sitatimende se-ANC bese iyaphendula ngokuhamba kwesikhathi.
NgoMsombuluko, uZille uhoxile ukuhambela isidlo sasekuseni ebesihlelwe yi-The New Age kulandela imibiko ethi lemicimbi ixhaswa ngemali yabakhokhi bentela.
Uthe yena nezinye izikhulu eziphezulu zeDA esikhathini esedlule bebeyihambela futhi bekhuluma emicimbini yeThe New Age ngoba bebenolwazi lokuthi iyona efaka imali, namalungu asuke ethenge amathikithi okungena.
“Kodwa manje ngoba sekuyacaca ukuthi lomcimbi uxhaswe ngemali yomphakathi ngamabhizinisi kahulumeni, iDA ngeke isazithamela,” kusho uZille.
Esitatimendeni lapho ebechaza khona ngokuhoxa kwakhe, uZille uthe uhoxe ngemuva kokufunda iphephandaba iCity Press, okuyilo elibike ukuthi u-Eskom, Telkom noTransnet bachithe imali eshisiwe ngemicimbi, ngesikhathi neSABC nayo ngapha ibasakazela ngaphandle kokubakhokhisa.
Ngesikhathi ebuzwa ngabe-Eye Witness News ukuthi ngabe ubabongile yini abakwaTelkom ngesikhathi benesidlo sasekuseni ophambilini kwiThe New Age ayesihambele, uZille uphendule wathi akakhumbuli enza lokho.
NgoLwesibili, i-The New Age ikhiphe imifanekiso ye-video kwi-website yayo lapho uZille ebonga khona abakwaTelkom ngokuxhasa isidlo sasekuseni seThe New Age eCape Town ngoFebhuwari nyakenye.